Khabiirka xeeldheer wuxuu muujinayaa xaqiiqooyinka SEO ee hada jira
Maanta shirkadaha badankood kama warhayaansida ay u adeegsan karaan SEO iyo ugu dambayntii, ka dhig qayb muhiim ah ee waxqabadyada dhiirrigelin iyo ganacsi. Tan iyo habka SEO leeyahayNasiib daro, noocyada ayaa si joogta ah isku dayey in ay gaaraan goobaha ugu sarreeya ee natiijooyinka raadinta si ay u kordhiyaan muuqaalkooda shabakadda internetka.Laakiin dhibaatadu waxay tahay in SEO u adeegto ma aha oo kaliya ujeedadaas laakiin tirada isbedelada kale ee suuqyada sidoo kale.
SEO ayaa la kulma isbeddel weyn tan iyo tandhaqanka ayaa la aasaasay, laakiin inta ugu badan ee fikradaha asaasiga ahi waa isku mid. By fahamka xaqiiqooyinka SEO ugu muhiimsan, shakhsiiyo sidoo kale shirkadu waxay qaadan kartaa faa'iidooyin badan.
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare ,Adeegyada Dijital ah, wuxuu sharxayaa xaqiiqooyinka asaasiga ah ee ku saabsan SEO, khuseeya maanta iyo mustaqbalka dhow.
Asaaska aasaasiga ah waa mid Halis ah
Hagaajinta goobta ah ee muhiimka ah sida ay u xaqiijiso taaswebsaydh waxaa laga helayaa mashiinka raadinta. Weli waxa ay diiradda saareysaa xayeysiisyada hadda. Warbaahin lacageed iyo suuq geyntateknoolajiyadu waxay hirgeliyeen khayraad ka yimaada kooxaha xayeysiinta guryaha sababtoo ah miisaankooda iyo xawaaraha. Si kastaba ha noqotee, inta badan ee jirawebsite-yadu wali waxay ku jirtaa xaalad farsamo oo aad u xun, sidaa darteed waa in ay dib u eegaan oo ay dib u eegaan boggooda internetka. Marka la eego arrimahan, sharaxaadda asalka,cinwaanada bogga, URLS wax ku ool ah, iyo qodobada muhiimka ah ee la yiraahdo waa aasaaska, kuwaas oo muhiim u ah SEO-ga wax ku ool ah.
Qiime waa Boqorka
"Qiime waa Boqorka" waa falsafadda shaqsiyaadkain dunidan SEO akhriyo iyaga naftooda iyo macaamiishooda toban sano ka hor, laakiin waxa ay weli ku oolka maanta. Falsafadu waxay ku salaysan tahaydoodda abuuraysa mawduuc daruuri maaha in ay sii kordhiso ka qaybqaadashada iyo gaadiidka. Sidaa darteed, khabiiro SEO oo wada socdadaneeyeyaashu waa in ay abuuraan maskax ahaan si ay u naqshadiyaan content ee macmiil gaar ah. Kooxdu waa inay la timaadaa istiraatijiyadda isbedelka cayaarahaku guulaystaan ​​warshad gaar ah.
Qeybaha ku saleysan Webka waa bulsho
horraantii sannadkii 2000, kooxo SEO ah waxay doonayeen inay adeegsadaan bulshowarbaahinta si kor loogu qaado darajooyinka muhiimka ah. Inkastoo xaqiiqda ah in warbaahinta bulshada ay qayb ka qaadatay horumarinta makiinadaha raadinta, waaweli maaha inay bixiso wiishka tooska ah. Waxay ahayd mid xiiso leh in la fiiriyo sida saamileyda iyo suuq-geynta warbaahinta bulshada ay door muhiim ah ka ciyaartaykobcinta aqoonsiga calaamadaha makiinadaha raadinta. Xaalado kala duwan, noocyada ayaa isticmaala warbaahinta bulshada si loogu dhiirrigeliyo macaamiisha in ay raadiyaan astaantaiyada oo loo marayo matoorada raadinta. Marka sida ugu dhaqsaha badan macaamilka macaamiishu u socdaan in ay saameyn ku yeeshaan dib u eegista bloggers iyo quudinta la midka ah, habka ugu wanaagsan ee kor loogu qaadi karoWacyigelinta nooca waxaa weeye in lagu daro shakhsiyaadka saxda ah ee dhinacyada bulshada
SEO waa jihada u xayeysiiska
Xiriirinta SEO-ga oo leh nooc khiyaali ah oo la xidhiidhahalbeegga kaliya ee muhiimka ah waa muddo dheer. Waqtigaan, SEO wuxuu u muuqdaa inuu noqonayo isbeddelka xayaysiiska, samee xili uu bilaabayo mashaariicqabashada wada sheekaysiga caanka ah. Marka la eego, kooxaha SEO ee ugu horreeya waxaa badanaa lagu daraa waaxyada xayeysiiska. Waamicnaheedu waa in SEO ay u adeegto sida habka suuq-geynta, taas oo ROI-ga kaxeynaya iyo kobcinta sarrifka saamiyada.
Goobta ugu sareysa ee natiijooyinka raadinta waxay xaqiijineysaa taasAstaantaadu waxay kasbatay kalsooni waxayna abuurtaa gaadiid macquul ah oo ugu dambeeya u suurtagelisa inay u rogto martidaada internetka macaamiisha. Goorta la gaarayodarajooyinkan sare ayaa wali ah caqabad weyn, shaqooyin kale oo SEO ah ayaa u baahan inay u adeegsadaan hab cusub Source .